ကလေးတွေကို သွန်သင်ဆုံးမဖို့ ဒိတ်အောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်း (၅) ခု - For her Myanmar
ယောင်းရဲ့ သားသားမီးမီးကို ဆုံးမနည်းတွေက မှန်နေတာ သေချာရဲ့လား ?
ယောင်းတို့ရေ … သားသားမီးမီးတွေကို သွန်သင်ဆုံးမရတာလည်း အတော်လေးကိုမှ လက်ဝင်ပါတယ်နော်။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာပျော်ရွင်ဖို့က အဓိကဦးစားပေးဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ယောင်းအနေနဲ့ ဒိတ်အောက်နေတဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးမိရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ကလေးအတွက် ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်နည်းလမ်းတွေက ရှေးရိုးစွဲနည်းလမ်းကြီးတွေ ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
ဒါကတော့ တော်တော်များများလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အပြစ်လုပ်ရင် ရိုက်နှက်ဆုံးမတာက အဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ တို့ ငယ်ငယ်ကဆို အဆော့လွန်ရင် ဒါမှမဟုတ် အတန်းထဲမှာ အဆင့်ကျသွားရင် ဆော်ပလော်တီးခံရတာလေ။ မိဘကတော့ ကောင်းစေချင်လို့ ဆုံးမတာဆိုပေမဲ့ ကလေးတွေက စိတ်ဒဏ်ရာရသွားပြီး အသက်ကြီးလာရင် မိဘကို ခါးခါးသီးသီးဖြစ်ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။
Related article >>> ကလေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘာတွေ ဘယ်လို ကျွေးရမလဲ?
လူကြီးအများစုက မတ်တပ်ရပ်ဒဏ်ပေးတာဟာ ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါက ကလေးတွေက အရှက်ရစေတဲ့ ဒဏ်ပေးခြင်းအမှားတစ်ခုပါပဲ။ ကျောင်းတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စာမရရင် မတ်တပ်ရပ်နေဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ကျောင်းမှာ ကိုယ့်ကလေးကို ဒီလိုဒဏ်ပေးတယ်လို့ သိရရင် ကျောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ကလေးတွေကို ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။ ငါတို့ငယ်ငယ်ကလည်း ဒီလိုဒဏ်ပေးခံရတာပဲလို့ အပြောမခံပါနဲ့။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာကတော့ ကလေးတွေကို ထမင်းကျွေးတဲ့အခါ ပန်းကန်ထဲက အစားအစာတွေ မကုန်မချင်းစားရမယ်လို့ အမိန့်ပေးတာပါပဲ။ မှန်ပါတယ်…ကလေးတွေက ဆော့ရမယ်ဆို ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ပဲလေ။ ဒီအချိန်မှာ အတင်းရောအဓမ္မဆွဲခေါ်ပြီး အကုန်စားရမယ်လို့ အတင်းထိုးကျွေးတာ မှန်တဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစာစားချိန်မှာ သူတို့အတွက် ကျန်းမာစေတဲ့အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်စရာ သုံးလေးခုလောက်ထားပေးပြီး သူတို့ကြိုက်တာစားပါစေ။ ဗိုက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင် မကုန်သေးလည်း အတင်းမကျွေးပါနဲ့။ သူတို့ဆာရင် မေမေ့ကို ဆာကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။
သားသားမအိပ်ရင် ကလေးဖမ်းတဲ့လူကြီးက လာခေါ်သွားလိမ့်မယ်တို့ မီးမီးထမင်းတွေဖိတ်ကျရင် ညဘက်ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်လိမ့်မယ်တို့၊ နင်တို့တွေကို အမှိုက်ပုံကကောက်လာတာတို့နဲ့ ကလေးကို ခြောက်လန့်တာက ယောင်းကို စမတ်မဖြစ်သွားစေပါဘူး။ ကလေးအနေနဲ့ တကယ်မရှိတဲ့အရာကို ယုံကြည်ပြီး အမြဲလိုလိုထိတ်လန့်နေမှာ ဖြစ်သလို အရွယ်ကြီးလာရင်လည်း သူများပြောသမျှယုံနေပါလိမ့်မယ်။
စူးစမ်းစအရွယ်မှာ ကလေးတွေက အရာရာကို သိချင်နေတာမို့ ပေါက်တတ်ကရလေးတွေလည်း မေးတတ်ပါတယ်။ သူတို့မေးခွန်းတွေက များသောအားဖြင့် “သားတို့ကို ဘယ်လိုမွေးလာတာလဲ” ဆိုတဲ့ဖြေရကျပ်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါတွေမှာ ဘာတွေလာမေးနေတာလဲလို့ အော်ငေါက်ပစ်တာတွေ၊ ဒီကလေး စပ်စုလိုက်တာ သွားစမ်းလို့ နှင်ထုတ်တာတွေက ကလေးရဲ့စူးစမ်းလေ့လာချင်တဲ့စိတ်ကို ပိတ်ပင်တာနဲ့တူတူပါပဲ။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ လေ့လာမေးမြန်းတာက မကောင်းဘူးလို့ အထင်ရောက်စေတာကြောင့် မသိတာကို မသိဘူးလို့မပြောဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာမျိုးတွေ၊ ဗဟုသုတမရှာဖွေတော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကဲ…ယောင်းတို့ရေ။ ဒီလောက်ဆိုရင် သားသားမီးမီးတွေကို ဆုံးမနည်းအမှားတွေကို ယောင်းတို့သိကြလောက်ပြီပေါ့နော်။ မေမေတွေလည်း မှားနေတာရှိရင် ပြင်သင့်တာပြင်ပြီး မေမေမဖြစ်သေးတဲ့ ယောင်းတွေကလည်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြင်မတော်တာရှိရင် နားလည်အောင်ရှင်ုးပလိုက်ကြပါဦး။
ယောငျးရဲ့ သားသားမီးမီးကို ဆုံးမနညျးတှကေ မှနျနတော သခြောရဲ့လား ?
ယောငျးတို့ရေ … သားသားမီးမီးတှကေို သှနျသငျဆုံးမရတာလညျး အတျောလေးကိုမှ လကျဝငျပါတယျနျော။ ကလေးတှရေဲ့ စိတျကနျြးမာပြျောရှငျဖို့က အဓိကဦးစားပေးဖွဈနတေဲ့ခတျေကွီးမှာ ယောငျးအနနေဲ့ ဒိတျအောကျနတေဲ့နညျးလမျးတှကေို သုံးမိရငျ နောငျတဈခြိနျမှာ ကလေးအတှကျ ထိခိုကျလာနိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုဘယျနညျးလမျးတှကေ ရှေးရိုးစှဲနညျးလမျးကွီးတှေ ဖွဈနပွေီလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ…
ဒါကတော့ တျောတျောမြားမြားလညျး သိပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ ကလေးတှေ အပွဈလုပျရငျ ရိုကျနှကျဆုံးမတာက အဖွတေဈခုမဟုတျပါဘူး။ တို့ ငယျငယျကဆို အဆော့လှနျရငျ ဒါမှမဟုတျ အတနျးထဲမှာ အဆငျ့ကသြှားရငျ ဆျောပလျောတီးခံရတာလေ။ မိဘကတော့ ကောငျးစခေငျြလို့ ဆုံးမတာဆိုပမေဲ့ ကလေးတှကေ စိတျဒဏျရာရသှားပွီး အသကျကွီးလာရငျ မိဘကို ခါးခါးသီးသီးဖွဈဖို့ အလားအလာမြားပါတယျ။
Related article >>> ကလေးတှကေို ဘယျအခြိနျမှာ ဘာတှေ ဘယျလို ကြှေးရမလဲ?
လူကွီးအမြားစုက မတျတပျရပျဒဏျပေးတာဟာ ပွငျးထနျတဲ့ပွဈဒဏျမဟုတျဘူးလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ ဒါက ကလေးတှကေ အရှကျရစတေဲ့ ဒဏျပေးခွငျးအမှားတဈခုပါပဲ။ ကြောငျးတှမှောလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ စာမရရငျ မတျတပျရပျနဆေိုတာမြိုးတှပေါ။ ကြောငျးမှာ ကိုယျ့ကလေးကို ဒီလိုဒဏျပေးတယျလို့ သိရရငျ ကြောငျးရဲ့တာဝနျရှိသူနဲ့ ဆှေးနှေးပွီး ကလေးတှကေို ဒါမြိုးမလုပျသငျ့ကွောငျး ရှငျးပွပါ။ ငါတို့ငယျငယျကလညျး ဒီလိုဒဏျပေးခံရတာပဲလို့ အပွောမခံပါနဲ့။
ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတာကတော့ ကလေးတှကေို ထမငျးကြှေးတဲ့အခါ ပနျးကနျထဲက အစားအစာတှေ မကုနျမခငျြးစားရမယျလို့ အမိနျ့ပေးတာပါပဲ။ မှနျပါတယျ…ကလေးတှကေ ဆော့ရမယျဆို ထမငျးမေ့ ဟငျးမပေဲ့လေ။ ဒီအခြိနျမှာ အတငျးရောအဓမ်မဆှဲချေါပွီး အကုနျစားရမယျလို့ အတငျးထိုးကြှေးတာ မှနျတဲ့လုပျရပျမဟုတျပါဘူး။ အစာစားခြိနျမှာ သူတို့အတှကျ ကနျြးမာစတေဲ့အစားအသောကျတှကေို ရှေးခယျြစရာ သုံးလေးခုလောကျထားပေးပွီး သူတို့ကွိုကျတာစားပါစေ။ ဗိုကျပွညျ့သှားပွီဆိုရငျ မကုနျသေးလညျး အတငျးမကြှေးပါနဲ့။ သူတို့ဆာရငျ မမေကေို့ ဆာကွောငျးပွောပါလိမျ့မယျ။
သားသားမအိပျရငျ ကလေးဖမျးတဲ့လူကွီးက လာချေါသှားလိမျ့မယျတို့ မီးမီးထမငျးတှဖေိတျကရြငျ ညဘကျထမငျးလုံးတစ်ဆခွေောကျလိမျ့မယျတို့၊ နငျတို့တှကေို အမှိုကျပုံကကောကျလာတာတို့နဲ့ ကလေးကို ခွောကျလနျ့တာက ယောငျးကို စမတျမဖွဈသှားစပေါဘူး။ ကလေးအနနေဲ့ တကယျမရှိတဲ့အရာကို ယုံကွညျပွီး အမွဲလိုလိုထိတျလနျ့နမှော ဖွဈသလို အရှယျကွီးလာရငျလညျး သူမြားပွောသမြှယုံနပေါလိမျ့မယျ။
စူးစမျးစအရှယျမှာ ကလေးတှကေ အရာရာကို သိခငျြနတောမို့ ပေါကျတတျကရလေးတှလေညျး မေးတတျပါတယျ။ သူတို့မေးခှနျးတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ “သားတို့ကို ဘယျလိုမှေးလာတာလဲ” ဆိုတဲ့ဖွရေကပျြတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလိုအခါတှမှော ဘာတှလောမေးနတောလဲလို့ အျောငေါကျပဈတာတှေ၊ ဒီကလေး စပျစုလိုကျတာ သှားစမျးလို့ နှငျထုတျတာတှကေ ကလေးရဲ့စူးစမျးလလေ့ာခငျြတဲ့စိတျကို ပိတျပငျတာနဲ့တူတူပါပဲ။ ကလေးတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ လလေ့ာမေးမွနျးတာက မကောငျးဘူးလို့ အထငျရောကျစတောကွောငျ့ မသိတာကို မသိဘူးလို့မပွောဘဲ ရငေုံနှုတျပိတျနတောမြိုးတှေ၊ ဗဟုသုတမရှာဖှတေော့တာမြိုးတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ကဲ…ယောငျးတို့ရေ။ ဒီလောကျဆိုရငျ သားသားမီးမီးတှကေို ဆုံးမနညျးအမှားတှကေို ယောငျးတို့သိကွလောကျပွီပေါ့နျော။ မမေတှေလေညျး မှားနတောရှိရငျ ပွငျသငျ့တာပွငျပွီး မမေမေဖွဈသေးတဲ့ ယောငျးတှကေလညျး ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ အမွငျမတျောတာရှိရငျ နားလညျအောငျရှငျုးပလိုကျကွပါဦး။
Tags: children, Family, home, Kids, mom, Motherhood, parenting